Waa Maxay Koodhadhka Gaaban ee Wordpress? - Liiska Faylka fudud
Nidaamyada gaagaaban ee WordPress waa hab caqli-gal ah oo loogu daro mawduuc isku-dhafan iyo ka-shaqeysiinta boggaga internetka. Kaliya waxaad si toos ah guntigaaga gaaban u gelineysaa waxyaabahaaga markii boggaaga la muujiyo, WordPress wuxuu beddelayaa guntiga gaaban oo lagu shaqeynayo dhexdiisa.
[eeSFL allowupload = "USER"]
Qaybaha ayaa qeexaya qaybta gaaban. U adeegso laba-biinle si aad u muujiso qoraalka gaaban ee saxda ah, taas oo ah sida aan halkan ku samayn karo. Laakiin maxaad u dooneysaa inaad taas sameyso?
The "eeSFL”Qayb ayaa shiday jawaab WordPress ah oo samaynaysa isku beddelka. Tan waxaa lagu qoray baakadka ama dulucda.
Qaybta "allowupload =" "USER" waxay u sheegaysaa mawduuca ama sheygu inuu sameeyo ama aanu wax qaban. Halkan Liiska Faylka Fudud waxaa loo sheegay inay muujiso foomka galka faylka oo kaliya si aad u gasho dadka isticmaala.
Nidaamka gaagaaban ee WordPress ayaa sidoo kale ku jiri kara waxyaabo:
[pluginName do = "this"] Haye! Sidee tahay adiga [/ pluginName]
Mararka qaarkood mawduucyada iyo fiilooyinka ayaa tan u adeegsan doona inay muujiyaan "tan ama tan". Waxyaabaha ku lifaaqan waxay noqon karaan muujinta asalka ah, kaliya waa la beddelay haddii xaalad cayiman la buuxiyo.
In kasta oo aad dhigin karto lambar gaaban meel kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad ka kooban tahay WordPress, isticmaal Xannibaadda Shortcode haddaad awoodid.
Ha ka baqin lambarka gaaban.
U cusbooneysii Faylka Liiska Fudud Pro